Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Nikoloz Apkhazava as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Georgia to the Republic of the Union of Myanmar – Ministry of Foreign Affairs
Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Nikoloz Apkhazava as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Georgia to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Nikoloz Apkhazava as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Georgia to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Kuala Lumpur.
Mr. Nikoloz Apkhazava was born on6July 1971 in Zugdidi, Georgia. In 1993, he obtainedadiploma in International Law from Faculty of International Law and International Relations, Tbilisi Ivane Javakhishvili State University in Georgia. From 1998 to 2003, he studied at Graduate School of International and Business Law and Social Sciences of Yokohama National University in Japan and earned Master of International and Business Law and Doctor of Laws (L.L.D). From July to October 1993, Mr. Nikoloz Apkhazava served asaLeading Specialist at State Constitutional Commission, Parliament of Georgia in Tbilisi. He also served as Legal Advisor to business firms and organizations. From October 2008 to December 2011, he served as Minister Counsellor at the Embassy of Georgia in Japan. From January 2012 to February 2017, he served as the Ambassador of Georgia to the Republic of Korea. Since April 2017, he has been serving as Ambassador of Georgia to Malaysia.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက Mr. Nikoloz Apkhazava အား ကွာလာလမ်ပူမြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
Mr. Nikoloz Apkhazava ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၊ Zugdidi မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၊ Tbilisi Ivane Javakhishvili State University မှ နိုင်ငံတကာဥပဒေဘာသာရပ်ဖြင့် ဒီပလိုမာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယိုကိုဟားမားတက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် စီးပွားရေးဥပဒေ မဟာဘွဲ့နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေပါရဂူဘွဲ့တို့ကို ရရှိခဲ့သည်။ Mr. Nikoloz Apkhazava သည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ အောက်တိုဘာလအထိ ဂျော်ဂျီယာလွှတ်တော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကော်မရှင်တွင် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများတွင်လည်း ဥပဒေပညာရှင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ တိုကျိုမြို့ရှိ ဂျော်ဂျီယာသံရုံးတွင် သံမှူးကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ လက်ရှိ အချိန်ထိ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည်။
Mr. Nikoloz Apkhazava သည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်